Matematika vaovao noho ny hetra | Hevitra MPANOHARIANA
raha tsy diso aho, ny hetra tambatra ( impot synthetique???) dia 6 % no voalazan'ny lalàna. ( titre II no misy io raha ny fitadidiako azy)
Nampidirin'i eprom @ 08:31, 2007-11-12 [Valio]
Fa ao anatin'ny volavola-dalàna dia voasoratra tsara fa atao miaraka na mitovy ny tahan'ilay fandoavana hetra...
Foana ny Taxe professionnelle izay tsy miova ny sara aloa amin'ny ankapobeny fa mety hitombo kokoa indray ny vola aloa raha jerena ny vola maty ao anatin'ny taona...
Nampidirin'i jentilisa @ 15:04, 2007-11-12 [Valio]
Fahadisoana: Nisy fahadisoana tokoa nataoko rehefa niverina namaky tsara ny volavolan-dalàna aho. Ny 6 isan-jaton’ny fototra tratran’ny hetra tokoa tahan-ketra amin’ny hetra tambatra. Ary tsy mahazo latsaky ny Ar16.000 ariary (andininy 01.02.05 ao amin’ny pejy 42 ao amin’ny teny frantsay ary 167 kosa amin’ny teny malagasy). Niverenako tsara mihitsy ka natao hanitsiana ny hevitra diso toy ny ahy angaha ity lahatsoratra ity. Ny hetra tambatra aloa izany dia 6%n’ny fototra angalana hetra izay ny sampan-draharahan’ny hetra mahefa no mamaritra azy.
Ny hetra ho an’ny karama sy ny toa azy no notantaraiko lavabe teo izay misy fahadisoana ihany koa rehefa namerina namaky azy lahatsoratra tsara aho: Hoy manko ny voasoratra eo amin’ny andininy 01.03.16 (pejy faha 169 amin’ny teny malagasy) izay indrisy tsy azoko tsara teo ampamakiana voalohany: Ampahany mihoatra hatramin’ny Ar180.000 .25 isanjato. Ary raha raisina kosa ny ao amin’ny teny frantsay (pejy 44 amin’io andininy io ihany) dia mametraka izao teny izao hoe: tranche supérieure à Ar180.000… 25 pour cent. Ahoana moa no hevitr’izany resaka izany?
Ny Raikipohy dia toy izao: Hetra alaina amiko raha mihoatra ny Ar180.000 ny karamako dia Ar4000 izay sanda alaina amin’ny mpikarama Ar180.000 ampiana ny 25%n’ny elanelan’ny karamako na ohatrinona io na ohatrinona amin’ny Ar180.000. Handray ohatra isika: raha raisina hoe Ar200.000 ohatra ny karamako dia Ar200.000 anesorana Ar180.000 no manome Ar20.000, ka io Ar20.000 mihoatra ny Ar180.000 io no akana ny 25% (na ampahaefany) ka Ar5000 izany. Raha atambatra izany dia Ar9000 no hetra alaina amin’ny karama Ar200.000 fa tsy Ar50.000 tsy akory. Ohatra faharoa fandrao misy tsy mahazo Raha Ar181.000 ny karama dia efa mipetraka aloha ny Ar4000 iaingan’ny kajy nametrahana ny Ar180.000 mandrakariva. Ny elanelana tratran’ny 25% izany dia Ar(181.000 – 180.000 =) 1000. Ny ampahaefatry (i.é. 25%) ny 1000 moa dia Ar250 ka io izany no miampy ny Ar4000 “hetra fototra�? dia manome Ar4250.
Fehiny: manana ny fahadisoako tokoa aho. Ny olana dia nohadinoako ilay fomba fikajy mahazatra izay nisy ambaratongan-tahan-ketra ihany koa (afa-baraka izaho izay efa nianatra kely io zavatra io ihany koa). Na izany na tsy izany dia nitovy tamin’ny ankamaroan’ny sain’ny olona maro ny eritreritro. Raha nanazava ny tompon’andraikitra dia tokony tsy nionona tamin’ny fitenenana hoe mihena tokoa ilay hetra fa nahitsy avy hatrany ilay tao an-tsain’ny maro hoe raha mikarama efa-bolana aho izany dia lasan’ny fanjakana ny karamako iray volana. Nisy ihany iray tamin’ny mpikarajia niezaka nanazava ity saingy tsy azon’ny mpihaino mihitsy ny fomba nanazavany azy satria na izy aza tsy tena nahay izay tena tokony hikajiana azy. Izaho aza eto ampanoratana dia mieritreritra fa na ny mpanao gazety nihaino ny tale nisahana ny fananganana ity tetibola ity aza dia ahiako ho tsy nahazo ny resany fa nampita ny ohatra tao anaty taratasy ihany fandrao azon’ny mpamaky ilay izy saingy aleoko indray miteny hoe fanahiana tsy mitombina koa izany. Ataoko fa tsy ao anatin’ny fahadisoana intsony aho taorian’izay fanitsiana nataoko izay. Marihina fa vao fanehoankevitra iray ihany no novakiako hatreto fa aty an-trano aho no mandrafitra indray ny lahatsoratra. Na mety ho efa nisy aza ny fanazavana nanitsy dia averiko ihany ity satria hoy ny fitenenana malagasy manao hoe “Soa	kenda hahay mitsako, Soa lavo hahay hamindra�? no raha misy ny mbola tsy mahazo ny resaka dia afaka ny mamaly ihany aho raha manana fahafahana mivoivoy kely. Fampianarana sy fifanabeazana rahateo no banjinitsika fa tsy ho amin’ny fandranitana loatra.
Nampidirin'i jentilisa @ 07:05, 2007-11-13 [Valio]